LOU JIN: AFRO-CHINESE, AKWARTKWỌ A NA-AKW AKWỌ NSON, NA-EME AJ OFJ OF RACIS na China - AFRIKHEPRI
Ọ mepụtara bọlbụ nke enwere ike iji ya maka 80 afọ
monday, nwere ike 25, 2020
Lou Jing, afọ 20 ndị na-eto eto bụ Chinese, bụ Métis. Nna ya amaghi oji, nne ya bu Chinese. Nna Lou Jing, ụgbọ mmiri ndị America na America, na nne nwata nwanyị ahụ na-emekọ ihe tupu ya alọghachi n'ụlọ, n'amaghị na ọ dị ime ya. Nwanyị ahụ, onye na-eme maka ụdị American Idol (Gaa na-aga, Oriental Angel), kpalitere mmeghachi omume nke ịkpa ókè agbụrụ na weebụsaịtị China, na ebe ọ na-egosi na agba ya ... M na-eme ka ị were ndị ọzọ.
Na netwọk, n'etiti ọtụtụ mmeghachi omume, ihe ka ọtụtụ n'ime ndị China na-ekwu banyere eziokwu ahụ bụ na Lou Chin Lou Jing rutere Shanghai na agbanyeghị, na ọ bụrụ na ịkpa ókè agbụrụ, ọ ga-erubeghi nke a. Dị ka usoro ndị a si kwuo, Lou Jing malitere ịwakpo Net, mgbe nne ya kpughere na ya aghọgbuwo di ya, bụ nke Lou Lou Jing ga-arụpụta. Ka o sina dị, ihe ọ bụla ihe kpatara ngọpụ ahụ siri ike ma ọ bụghị ịhụ na n'azụ ọgụ ahụ ọ tara ahụhụ, ọ bụ agba nke Lou Jing (na onye ekwuru na obodo a na-ezo aka) nke e depụtara. N'otu ụzọ ahụ, ọgụ ahụ yiri ka ọ na-arịwanye elu dịka Lou Jing na-enwe ọganihu na ngosi ahụ. Iji kwuo na nkwupụta ndị e kwuru na ịkwa iko nke nne ya bụ nanị ihe eji eme ihe banyere ịkpa ókè agbụrụ nke ụfọdụ, anyị adịghị anya.
A ga-eji ihe a mee tụnyere njem Obama na-aga n'oge na-adịbeghị anya na Chin, na obi ike ọ na-akpali n'etiti ndị na-eto eto ndị China. Ọ dị njọ, iji nwee ekele maka onyeisi oche Afro, ma na-akparị akpụkpọ anụ ojii nke China, na-eche na ọ bụghị n'ọnọdụ ya na ihe ngosi nke na-eme na mba ya (ọ bụrụ na ọ dị mma, cheta na Lou Jing bụ Chinese, ọ bụghị site na nwabata, kama site na ịmụ nwa). Mgbe m na-eme nchọgharị na Weebụ China (saịtị na Bekee n'ihi na Mandarin na m, mwute!), Enweghi m ike inye aka ma ọ bụrụ na m na-eme ihe ọzọ, ọsọ ọsọ nke China na Black Africa. Ọ dịghịzi adị na isi obodo Africa ka ụmụ agbọghọ China na-ere ere na n'okporo ámá, ma ọ bụ ndị na-eto eto Chinese na-ere ahịa ha n'aka ndị isi (dịka ihe, ọbụna ụlọ ọrụ iri, nwanyị nke na-akwụsi elu, ọ bụ mgbe niile mma ịla n'ụlọ).
Ndị isi na-ahụ maka mgbasa ozi ndị China ekwuola n'ụzọ doro anya na ịkpa ókè agbụrụ nke ndị ọrụ Intaneti. Ee, eziokwu ahụ bụ na Lou Jing bụ otu n'ime ndị nyocha ise na Shanghai na-egosi na akụkụ nke ndị mmadụ hụrụ ya karịa ụcha akpụkpọ ahụ. Ma, ọ bụrụ na China na-achọ ijide ọkwa onye na-agba aka na United States, ọ ga-ewe karịa ikwu okwu na nkwupụta ọha na eze. Anyị aghaghị ịkụziri China nke ka na-agbalị ịme ka ọ bụrụ nwa na-adịghị ekwe omume nke nwa Chinese na nwa. China ga-enwe mmasị n'ịkụziri ndị mmadụ banyere ịkwanyere ndị ọzọ ùgwù. Ma, ịmara ngalaba nke Afrika ka a sọpụrụ gị ... mgbaghara, ịkwado ihe niile na iji ụkwụ na-aga ụkwụ, ọ dịghị ihe ọ bụla a ga-eme na-atụ anya ka ị sọpụrụ ụfọdụ nkwanye ùgwù.
Ihe ọzọ na-ekwu na ọ dịghị agha ịkpa ókè agbụrụ na ọgba aghara Lou Jing: nwa agbọghọ ahụ n'ọtụtụ ajụjụ ọnụ, kwuru na ọ ghọtara na ọ bụ oji, site na itinye na ngosi ahụ. Lou Jing na-ekweta na ya enweghi ịkpa ókè agbụrụ n'oge ọ bụ nwata na nwata, ma e wezụga maka ajụjụ ole na ole na-ejikarị agba agba. N'ebe ahụ, enweghị m ike iche ma eche echiche: n'ihu ajụjụ ndị a ka ọ na-apụta, Lou Jing ahụghị na agba ya abụghị nke kachasị òkè, ọ chọghịkwa ịmatakwu ihe na ya? Hum! N'ebe a, agwara m onwe m, onye ọ bụla nweere onwe ya ịchọrọ ịkụ ụmụ Métis, ma, ka, anyị chọrọ ka ndị mụrụ anyị ghara ịdị na-achọ ọdịmma onwe ha, na ịkụziri ụmụaka ndị ha bụ. Obama bụ ihe ọ bụ taa (nwere obi ike n'iche ndị a) n'akụkụ ụfọdụ n'ihi agụmakwụkwọ nne ya ọcha nyere ya. Gịnị ka nne Lou Jing mere iji kụziere nwa ya nwanyị ihe ọmụma banyere ụdị onye ọzọ a? na mba ebe akara nchịkwa na - eduga n'ihe anyị maara, anyị nwere ike ikele ọrụ nne Lou Jing, bụ onye debere abụba ya ruo ọgwụgwụ. Ma, gịnị mere ị ga-eji kwusi ákwá mgbe nwa ya nwanyị jụrụ ya banyere nna ya? Lou Jing na-azọrọ na ha mere ya otu ugboro, ma ghara ịmalite ọzọ. Na ikwu maka agba nke Lou Jing na eziokwu ahụ na ọ maghị na ọ bụ oji naanị afọ 20 (nwa m nwanyị kwa!) (["Mgbe m bụ nwata, m na - Amaghị m n'ezie na m dị iche na ndị ọzọ, yabụ na m dị iche. "(Mgbe m bụ nwata, amaghị m na m dị iche na ndị ọzọ.) naanị mgbe m sonyere n'egwuregwu ahụ ka m ghọtara na m dị iche na ndị ọzọ)), anaghị m eguzogide ọchịchọ ịme ka okwu a banyere onye na-amaghị aha na otu n'ime ọtụtụ saịtị ndị gara:
"Ntak emi ẹkedọhọde ke enye ama ọfiọk ke enye ama ọsọn̄ọ? Ị nwere agba akpụkpọ mgbe ị banyere asọmpi ahụ? Ònye na-akwado ndị na-asọ asọ 30 na asọmpi mba? ((Ntak naanị mgbe asọmpi ahụ ghọtara na ọ dị iche?) Ò nwetara akpụkpọ ahụ ya mgbe ọ banyechara asọmpi ahụ?))
Iji laghachikwute ndị na-arụ ụka na enweghi ahụmahụ ịkpa ókè, Lou Jing apụghị ịkatọ nke a taa, ọ bụrụ na anyị echetara ha na mgbe mgbe, dị ka obere, a na-ajụkarị gị ka ị nọrọ na gị nkuku ma ghara ife. Ozugbo ị nwetara ike, a na-akọwa nsogbu ndị ahụ. Onye nwere ike iche n'echiche na Lou Jing amaghi ndụ ya, ma ka ọ na-aga n'elu ngosi ahụ, ịkpọasị nke ụfọdụ juru. Site na mgbe ọ bụ onye mmeri mba, ọ dịghị! Ma gịnị mere o ji ruo ọkwa ya (5e)? Pardi, ka na-enwe obi ụtọ na n'otu mba dị otu ijeri mmadụ, onye ọ bụla anaghị anọ na njem ahụ "enweghị ụmụaka Métis n'ihi na anyị nwere ihe ize ndụ na-efunahụ omenala anyị."
Nna m, onye African a, ma ọ bụghị Africa a?
Ihe kacha mma maka ikpeazụ. Dị ka ọtụtụ ndị Lou Jing si kwuo, nwa agbọghọ ahụ na nne ya kọrọ na nna ya bụ African American, ọ bụghị Afrika. Ah, n'ezie, ọ bụ nnukwu ihe dị iche! Lou Jing gọrọ agọ a, ma ọ bụrụ na o kwuru okwu ndị a, Chineke na-emechi, ụwa na-agbazi: otu ọkara Afro-Chinese nke na-achọpụta n'oge na-adịghị anya na ọ bụ akpụkpọ anụ (TV) , ihe akụkọ nke na-edozi ihe edozi na China n'etiti etiti (ịkpa ókè agbụrụ, karịsịa nwa mgbochi), na "onye" nke ga-ahụ ya ka ọ bụrụ ihe dị nsọ karị ka ọ bụrụ nna nna Afrika-nke America karịa 100% african? Ọfọn, m na-akwụsị n'ebe ahụ tupu enwee isi ọwụwa.
Isi Iyi: Culturefemme.com
Ebee ka ị nwere ike ịzụta nwa bebi ojii maka ụmụ gị
Nwoke na-edozigharị ụmụ nwanyị, akwụkwọ nke na-eso ụzọ Dr. Mukwege